मा Cryptocurrency बजार विकास 2018 - Blockchain समाचार
मा Cryptocurrency बजार विकास 2018
कारण परम्परागत एक्सचेन्जहरू मा Bitcoin वायदा र डेरिवेटिव को प्रक्षेपण; एक भन्दा बढी को स्थापना 100 cryptocurrencies व्यापार भन्ने हेज कोष; र cryptocurrency बजार पूँजीकरण भन्दा बढी पुगन $500 अरब मा 2017, विशेषज्ञहरु justly हालको cryptomarket हाम्रो पुस्ता को तेज बढ्दै र सबै भन्दा होनहार उद्योग भएको छ भन्ने विश्वास गर्छन्. हामी cryptocurrency बजार विकास मा विचार र विशेषज्ञहरु को भविष्यवाणी र प्रमुख उद्योग खेलाडीहरू भेला गरेका छन् 2018.
Node40 को सीईओ, एक blockchain प्रशासन र cryptocurrency कर अनुपालन कम्पनी, पेरी Woodin विश्वास गर्छ कि 2018 cryptocurrency लागि ठूलो सार्वजनिक जागरूकता को वर्ष हुनेछ.
यो हरेक मित्र र सापेक्षिक तपाईं कति जान्न चाहन्छु हुनेछ जब वर्ष हुन गइरहेको छ र यो कसरी खरिद गर्न, भन्छन् Woodin.
पक्कै त्यहाँ cryptocurrencies प्रयोग संख्या मा एक वृद्धि हुनेछ. जोनाथन Sela, YouNow द्वारा साजसज्जा को SVP व्यापार विकास, जो मिडिया वातावरण निर्माण गर्न blockchain प्रयोग, अनुमान छ कि अन्त द्वारा 2018, हामी भन्दा देख्ने 50 लाख मान्छे विश्वव्यापी कम्तिमा एक cryptocurrency पकड. जबकि लन्डन ब्लक विनिमय द्वारा नयाँ अनुसन्धान (LBX) कि अन्तमा छ को अन्त द्वारा 2018 तीन millennials मा एक गुप्त बजार मा निवेश हुनेछ.
Bitcoin वायदा र विकल्पहरू अनुबंध सूची परम्परागत एक्सचेन्जहरू CBOE र सीएमई को निर्णय संसारको पहिलो cryptocurrency गरे र, शायद चाँडै, अन्य cryptocurrencies, नयाँ सम्पत्ति बहुमूल्य धातु समान वर्ग, ऊर्जा स्रोतहरू, सरकारी बन्ड, र धेरै अन्य सामान र जमानत. यसरी, अर्को वर्ष cryptocurrencies को स्थिति विद्यमान वित्तीय र कानुनी प्रणालीमा थप वैध हुनेछ. सिमोन यू, StormX सीईओ, साझा यो कथन. उहाँले पक्का छ 2018 cryptocurrency लागि सबै भन्दा राम्रो वर्ष को एक हुन र नयाँ स्तरमा बजार धक्का हुनेछ.
अहिलेसम्म यो Bitcoin र अन्य cryptocurrencies को मूल्य धक्का मुख्यतया खुद्रा लगानीकर्ताले भएको छ. एक वायदा बजार र विकल्पहरू संग जोखिम प्रोफाइल कम गर्न, थप संस्थागत लगानीकर्ताले अन्तमा मा जम्पिङ सुरु गर्न सक्षम हुनेछ. तर वित्तीय उपकरण संग, हामी संस्थागत पैसा प्रवाह डलर ट्रिलियनबाट देख्न सक्थे अर्को केही वर्ष.
Shidan Gouran, विश्व Blockchain टेक्नोलजी को अध्यक्ष, cryptocurrency मा बादल मडारिरहेको पनि अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू देख्ने पक्कै छ 2018.
“जबकि उपभोक्ता जनसंख्याको एक महत्वपूर्ण प्रतिशत त प्रयोग वा, कमसेकम, cryptocurrencies संग सहज, एउटै अझै सरकारको र संस्थाहरू को भने गर्न सकिँदैन. यो अपेक्षा गर्न छ, संगठन रूपमा, सार्वजनिक र निजी दुवै, नयाँ प्रविधिहरू गोद मा अब सिक्ने घटता छ गर्छन. हामी यो सिकने मा cryptocurrency र blockchain विकासक्रम को बिन्दु हुनेछ महसुस 2018, यो क्षेत्र र सार्वजनिक संस्थागत संलग्नता रोकियो छ कि अवरोध थुप्रै विजयी. यो नै पृष्ठ मा सबैलाई ल्याउनेछ, निकै प्रभावशाली संस्थाहरू को सहभागिता यी प्रविधिहरू को सम्भावित अर्थपूर्ण, कार्यक्षमता अनलक अन्यथा सम्भव छैन भनेर. cryptocurrencies मा जारी संस्थागत लगानी बीच, Bitcoin आधारित वायदा को भेटी, र सरकारको आफ्नै blockchain परियोजनाहरुमा काम गर्न सुरु, त्यहाँ पहिले नै यी प्रविधिहरू को लक्षण सार्वजनिक र संस्थागत स्तर मा पक्रने छन्. हामी, त्यसैले, कि भविष्यवाणी 2018 भरपर्दो विकास र ग्रहण देख्ने, नयाँ stakeholders स्वागत द्वारा मिति अवस्थित प्रगति मा निर्माण”.
Biddable मार्क Lurie को सीईओ अनुसार, धेरै लगानीकर्ताले वैकल्पिक cryptocurrencies केन्द्रित हुनेछ, सहित litecoin, ड्यास, र आईओटा, बरु Bitcoin वा ईथर भन्दा. Lurie विश्वास गर्छ कि लगानी मा, मा 2018, त्यहाँ विविधता cryptoassets र गुप्त लगानी व्यवस्थापन तिर बलियो धक्का हुन लगानीकर्ताले परम्परागत सम्पत्ति र लगानी हेर्न बाटो ह्यान्डल गरिनेछ जाँदै गर्नुपर्छ.
माइक बीम, यस गुप्त कम्पनी को सीईओ, Bitcoin मा कम volatility वैकल्पिक cryptocurrencies मा प्रभाव र हामी पनि जमानत टोकन को वृद्धि देख्न भनेर उल्लेख. उहाँले एक बजार टोपी भविष्यवाणी $5 ट्रिलियन वर्ष को अन्त द्वारा.
dmitriy Zhulin, INS इकोसिस्टमका सह-संस्थापक, अपेक्षा रूपमा blockchain प्रविधि कोर्न जारी कि, Bitcoin लगभग सम्म बढ्नेछ $30-40,000 मा 2018 भुक्तानी र पूंजी संरक्षण को एक माध्यम रूपमा यसको सुविधा र थप ग्रहण आधारित. यसबाहेक, ट्रेवर Koverko, क्यानाडा कम्पनी Polymath को राष्ट्रपति, Bitcoin भुक्तानी नेटवर्क रूपमा निस्कनु हुनेछ भन्ने विश्वास गर्छ.
“हाल Bitcoin एक speculative सम्पत्ति र मूल्य को स्टोर रूपमा प्रयोग भइरहेको छ. तर बिजुली नेटवर्क जस्तै समाधान स्केलिङ रूपमा निस्कनु ( Bitcoin आधारित नेटवर्क, प्रयोगकर्ताहरूका micropayments असीमित नम्बर गर्न अनुमति दिन्छ - DeCenter), Bitcoin गरेको उपयोगिता नाटकीय यसको मूल्य संग वृद्धि. वास्तविक प्रश्न हो यो Bitcoin 'मुख्य श्रृंखला हुनेछ’ यी अपग्रेड अपनाउने साहस छ वा यो जस्तै Bitcoin नगद अर्को श्रृंखला हुनेछ?”
Cryptocurrency बजार विकास
गुप्त समाचार 26.10.2018
गुप्त समाचार 29.10.2018
अर्को पोस्ट:blockchain प्रविधि कसरी विकास गर्छ 2018?